ड्याट्सन गाडीको 'हट डिल' योजनाका विजेताहरु घोषित - Lokpath Lokpath
२०७६, १३ फाल्गुन मंगलवार १५:३७
ड्याट्सन गाडीको ‘हट डिल’ योजनाका विजेताहरु घोषित
प्रकाशित मिति : २०७६, १३ फाल्गुन मंगलवार १५:३७
काठमाडौं । नेपालमा ड्याट्सन गाडीको आधिकारिक बिक्रेता पायोनियर मोटोकर्प प्रालिले ‘ड्याट्सन हट डिल’ योजनाको विजेता घोषणा गरेको छ। प्रालिले दशैँ तिहारका बेला ‘ड्याट्सन हट डिल’ सञ्चालन गरेको थियो ।
कम्पनीका अनुसार आफ्ना गाडी खरिद गर्ने ग्राहकमाझ सञ्चालित उक्त योजनाका १५ जना विजेता घोषणा गरिएको छ।
उक्त योजनामा विजेता घोषित भइ थाइल्यान्ड जाने अफर जित्नेमा चित्रकला घिमिरे, मनी राई, अजय घिमिरे, निलध्वज, ईश्वरीराज ढकाल, विक्रम थापा, अजय कुमार यादव, डा. ओएस अन्सारी, करण चौधरी र सुशील अग्रवाल छन्। सुनको सिक्का जित्ने ५ जनामा रुक्साना हक, विष्णुप्रसाद जैसी, लिला अधिकारी, सुमित्रा कुमारी भुसाल र विजेश्वर प्रसाद शाह रहेका छन्।
कुल १ सय ५१ जनाबाट गरिएको लक्की ड्रमा उनीहरुले उक्त उपहार जितेका हुन्। थापाथलीस्थित ड्याट्सन शोरुममा मंगलबार लक्की ड्र विजेता घोषणा गरिएको हो।
कम्पनीका अनुसार विजेतामध्ये १० जनाले थाइल्यान्ड भ्रमणमा जान पाउने भएका छन् भने ५ जनाले १०र१० ग्रामको सुनको सिक्का उपहार जितेका छन्। कार्यक्रममा कम्पनीका पदाधिकारीले विजेतालाई बधाई र धन्यवाद दिएका थिए।
कम्पनीले ड्याट्सन न्यु गो तथा ड्याट्सन रेडी गो ०.८ लिटर र १.० लिटर तथा गो प्लसको आधिकारिक बिक्रेताको रुपमा कारोबार गरिरहेको छ।
साथै उक्त कार्यक्रममा पायोनियर मोटो कर्पका पदाधिकारीद्वारा विजेताहरुलाई बधाई तथा धन्यबाद ज्ञापन गरिएको थियो ।
लकडाउन कहर : भृकुटीमण्डप बजार सुनसान
काठमाडौं । निम्न वर्गिय समुदायले किनमेल गर्ने बजार भनेर चिनिएको काठमाडौं उपत्यकाको भृकुटीमण्डप
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा आज शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक नौ अङ्कले वृद्धि
यस्तो छ आज सुन चाँदीको बजारभाउ
आदिकवि भानुभक्त आचार्यको सम्झनामा
कोरोना अपडेटः कुन जिल्लामा कति थपिए संक्रमित ? (पछिल्लो २४…
अर्थ, बैंक/वित्त, लोकपथ हाइलाईट, समाचार
सीमा नजिक बनेका भौतिक संरचनाहरु तत्काल हटाउन सरकारलाई निर्देशन